Monday June 10, 2019 - 11:53:59 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Howlgalka Midowga Afrika AMISOM ayaa sheegay in uu ka daalay dalabyo farabadan oo uu u diray Beesha Caalamka,kaas oo lagu dalbanayay in Ciidanka AMISOM laga taageero bixinta magta dadka rayidka ah.
Francisco Caetano Madeira, ayaa sheegay in AMISOM iyo Hay’adda UNSOS ay shirar badan qabteen kuwaas oo beesha Caalamka ugu baaqayay in ay bixiyaan lacag gaar ah oo loogu talagalo shilalka AMISOM ay u geystaan dadka Rayidka ah.
Waxaa uu sheegay in markii ay ku daaleen Beesha Caalamka ay Midowga Afrika ka codsadeen lacagtaas sanadkii la soo dhaafay ee 2018.
Francisco Caetano Madeira., ayaa intaas ku daray in $200,000 (laba boqol oo kun) oo dollar ay ka heleen Waddamada ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo uu xusay in sanadkii la soo dhaafay ay ku soo moodeen.
Waxaa kale oo uu sheegay in uusan filaneyn in sanadkan 2019 ay sidaas oo kale ku dhacdo,waxaana uu beesha Caalamka ka codsaday in ay iska dhaafaan yabooha beenta ah ee aysan fulineyn.
Dhamaan shirarkii ay qabteen ee ay ku dalbanayeen qoondada gaarka ah ee magta rayidka ayuu sheegay in ay Beesha Caalamka ballanqaad ku sameeyeen hayeeshee aysan waxba bixin.
Ugu dambeyn Mr Madeira ayaa ugu baaqay Midowga Afrika in ay qoondo gaar ah u sameeyaan arrintan dib u eegisna ku sameeyaan howlgalka iyaga oo qorshaha ku daraya bixinta magta dadka rayidka ah.
AMISOM ayaa inta badan ku lug yeelata khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo ay u geystaan Dadka Soomaaliyeed.